Igumbi likaCharlie eFale Yau - I-Airbnb
Igumbi likaCharlie eFale Yau
Suva, Central Division, i-Fiji
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Harry & Litia
I-Fale Yau - Ikhaya Lethu Liyikhaya Lakho I-Fale Yau iyikhaya lomndeni elikhulu, elinechibi lokubhukuda. Kunguhambo olufushane oluya e-Albert Park, i-CBD, izindawo zokudlela namabha. Wonke amagumbi okulala anamagumbi okugezela e-en-suite, abalandeli bakasilingi kanye ne-air con. Ilungele abahambi bebhizinisi: i-WiFi, iphrinta, izindawo zokuhlangana, kanye nababungazi bazokusiza izidingo zakho. Ukudla kwasekuseni kufakiwe futhi okunye ukudla kuyatholakala ngokucela noma uziphekele. Zisize efrijini lasekhishini elingu-24/7. Leli futhi ikhaya lezinja ezi-2 namakati ama-2.
Leli yikhaya lomndeni elikhulu futhi izivakashi zethu zingangena kuzo zonke izindawo eziphansi: Ikhishi, Igumbi Lokuhlala, Igumbi Lokudlela kanye novulandi onechibi lokubhukuda eliseduze.
Ihlotshiswe ngesitayela sikaLitia esiyingqayizivele esiyinhlanganisela yesitayela nokunethezeka. Uthathe ingxube yesiNgisi/isiFiji, Endala/Entsha eye yamukela abangani nomndeni ekhaya lethu iminyaka eminingi futhi manje yamukela izivakashi zethu.
I-Wifi – 13 Mbps
Ikhaya lethu lisendaweni eluhlaza kakhulu enkabeni yeSuva eneNgadi enkulu enokuthula. Ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka eFiji Museum, e-Albert Park, Ihhotela eliyisakhiwo sodumo iGrand Pacific. Uma ulapha ngebhizinisi Izinkantolo, izakhiwo zikahulumeni kanye ne-CBD konke kungaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10-15. Eduze kwayo kunesitolo sekhofi se-Ginger Cafe, Indawo yokudlela yase-Paradiso Italian kanye ne-Cafe 30. I-Metro Gym iqhele ngamamitha angu-200 kuphela futhi udonga loLwandle luseduze ukuze luhambe kahle.
Ibungazwe ngu-Harry & Litia
Mina nomkami sihlala esitezi esiphezulu ngakho sizobe siseduze ukuze sikusize nganoma yini oyidingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi sihlale sijabulela intambo enhle nezivakashi zethu. Uma singekho ekhaya umgcini wendlu yethu, uMereoni noma umshana wakhe uSalote bazobe bekhona. Kukhona nonogada kusukela ngo-6 ntambama kuya ku-6 ekuseni.
Mina nomkami sihlala esitezi esiphezulu ngakho sizobe siseduze ukuze sikusize nganoma yini oyidingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi sihlale sijabulela intambo enhle nezivakash…
Hlola ezinye izinketho ezise- Suva namaphethelo